Version 0.9.5 – Furu efu kwalite
February 11, 2014 site na rịọ 8 Comments
Version 0.9.5 tọhapụrụ adịchabeghị anya gara aga, na full version 0.9.5.1 e wepụtara ka. I nwere ike jụọ onwe gị,, Ana m achọ mmelite m WordPress dashboard na m ghara ịhụ ihe ọ bụla, si-abịa?
Nke a bụ kpọmkwem ihe mere 0.9.5 wee ndụ, e nwere oké egwu ebe metụtara mgbanwe mere kwalite API site WordPress 3.8 nke mere transposh igbochi niile mmelite (tinyere ya) si dashboard.
Ya mere,, ihe-eme?
Iji nweta nkwalite ndị ọhụrụ zuru version, e nwere ihe ole na ole nhọrọ:
gbanyụọ ugbu a Transposh ngwa mgbakwunye, ịlele maka mmelite, imelite ka version 0.9.5 si wordpress.org, rụọ ọrụ ngwa mgbakwunye, akara “ekwe ka update ihe n'uju version” ma melite ọzọ
ihichapụ gị ugbu a version nke ngwa mgbakwunye na nwụnye version si wordpress.org ma soro update usoro
aka download ọhụrụ version nnọọ dochie faịlụ gị na ihe nkesa.
Anyị bụ n'ezie ndo banyere nke a mgbaka
Nso efen idi ọhụrụ?
More asụsụ e kwukwara ka Google engine, na-agbanwe ole ka 82 na-akwado asụsụ!
Gịnị banyere 0.9.4?
Ọ bụ mîkemeke version, ofu okwu na Google zighachi akwụkwọ nnọchiteanya nke nkwado, anyị kwesịrị dere zuru post banyere ya kwa, ya mere 0.9.4, please accept our apology 😉
Kporie ọhụrụ version, na egbula-agwa anyị banyere ihe ọ bụla nsogbu